चुनावपछि यी नेताको के हुने हो हविगत ? – News Portal of Global Nepali
7:56 PM | 12:41 AM
चुनावपछि यी नेताको के हुने हो हविगत ?
3rd November 2017 मा प्रकाशित
Newly elected Nepalese Prime Minister Pushpa Kamal Dahal, also known as Prachanda, (L) sits onachair upon his arrival to administers the oath of office at the presidential building "Shital Niwas" in Kathmandu, Nepal, August 4, 2016. REUTERS/Navesh Chitrakar
काठमाडौं । आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावमा राजनीतिक बिरासत जोगाउने होडमा फेरि पनि पुरानै नेता मैदानमा उत्रेका छन् । नयाँ परिवेशमा जनप्रतिनिधि बन्ने आकांक्षीका रुपमा मैदानमा उत्रेका शीर्ष नेताको चुनावी भिडन्त कस्तो छ त ? प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको दोस्रो चरणको चुनावमा प्रमुख दलका अधिकांश शीर्ष नेताको राजनीतिक हैसियत परिक्षण हुंदैछ । मंसीर २१ गते हुने दोस्रो चरणको चुनाव, पहिलो चरणको भन्दा बढि रोचक हुनेछ । किनकी, बिभिन्न दलका पुरानै नेता भागबण्डाको उम्मेदवारीमा छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा डडेल्धुरावाट प्रतिनिधी सभाको उम्मेद्वार बन्दा देउवाका प्रतिद्धन्द्धीको खासै चर्चा छैन । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल चितवन क्षेत्र नं ३ वाट प्रतिनिधी सभाका लागि उम्मेद्वार बनेका छन् । जसले वर्तमान सरकारका वनमन्त्री राप्रपा नेता विक्रम पाण्डेको सामना गर्नुपर्नेछ । मत संख्या र गठबन्धनका हिसावले यी दुई नेता बीचको चुनावी भिडन्त निकै रोचक बन्नेछ ।
पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली झापा क्षेत्र नं पाँचवाट उम्मेद्वार बनेका छन् । ओली बिरुद्ध नेपाली कांग्रेसले महासमिति सदश्य खगेन्द्र अधिकारीलाई उठाएको छ । डाक्टर अधिकारी चुनाव लड्नैका लागि त्रिचन्द्र क्याम्पसको प्राध्यापक पद त्यागेर झापा ५ मा पुगेका हुन् ।
आन्तरिक बिबादकै बीच, कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल तनहुँ १ बाट चुनाव लडेका छन्, जहाँ वाम गठबन्धनका उम्मेदवार कृष्णकुमार श्रेष्ठ पौडेलको चुनौती बन्न सक्छन् । यसअघी रौतहट र काठमाडौबाट चुनाव जितेका एमाले नेता माधव नेपाल यसपटक काठमाडौं २ मै फर्केका छन् । जहाँ, यसअघीको चुनावमा माधव नेपालले एक क्षेत्र छाडेपछि चुनाव जितेका कांग्रेस उम्मेदवार दिपक कुईंकेल नेपालका निम्ति चुनौती बन्ने छन् ।
लगातार इलामबाटै प्रतिनिधित्व गर्दै आएका एमाले नेता झलनाथ खनाल इलाम १ बाट चुनाव लड्दै छन् । खनाल वाम गठबन्धनबाट उम्मेदवार बन्दा, उनि बिरुद्ध नेपाली कांग्रेसले भुपेन्द्र कट्टेललाई उठाएको छ । शीर्ष तहको चुनावी चर्चामा झापा क्षेत्र नंवर ३ पनि छ । यही क्षेत्रको बिबादले नेपाली कांग्रेस र राप्रपाबीचको तालमेल टुटेको छ ।
झापा क्षेत्र नंवर ३ मा कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाबिरुद्ध तेश्रो पटक चुनावी मैदानमा उत्रेका सरकारमै सहभागी राप्रपाका युवा नेता राजेन्द्र लिंङदेनलाई सरकार बाहिर रहेको वाम गठबन्धनको समर्थन छ । त्यस अर्थमा यहाँको भिडन्त थप रोचक बनेको हो । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावमा सिन्धुपाल्चोक पनि चर्चामा छ । हाल दुई निर्वाचन क्षेत्र कायम सिन्धुपाल्चोक एक नंवर क्षेत्रमा कांग्रेसका युवा नेता मोहन बस्नेतबिरुद्ध बाम गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका अग्नि सापकोटा मैदानमा छन् । विगत्को चुनावी नतिजा हेर्दा यहाँ अत्यन्तै झिनो मतअन्तरको हारजीत् हुनेछ । सिन्धुपाल्चोक दुई नंवर क्षेत्रमा कांग्रेससँग मिलेर राप्रपा प्रजातान्त्रिकका अध्यक्ष पशुपतिशम्शेर राणा उठेका छन् । तीन दशकदेखि राजनीतिमा सक्रिय राणा उमेरका हिसावले सम्भवतः अन्तिम चुनावी प्रतिस्पर्धा हुनसक्छ । राणा पहिलो संविधानसभा चुनावमा माओवादीका सांसद दावा तामाङ र दोस्रो संविधानसभामा एमालेका सांसद शेरबहादुर तामाङसँग पराजित भएका थिए । अहिले वाम गठबन्धनबाट शेरबहादुर तामाङले राणालाई चुनौती दिंदैछन् ।
रोचक भिडन्तका हिसावले गोरखा दुई नंवर क्षेत्रमा पनि दुई गठबन्धनको प्रतिष्ठा जोडिएको छ । एउटै राजनीतिक धरातलमा उभिएका नेता बाबुराम भट्टराई लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट चुनाव लड्दा, उनलाई वाम गठबन्धनबाट नारायणकाजी श्रेष्ठले चुनौती दिइरहेका छन् । पछिल्लो स्थानीय तह चुनावको मत परिणाम हेर्दा अत्यन्तै झिनो मतले हार जीत हुनेछ । कुनै बेला सहयात्री भएर एउटै पार्टीमा रहेका यी दुई नेता अहिले चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । पहिलो संविधानसभामा भट्टराई गोरखा–२ बाट र दोस्रो संविधानसभामा गोरखा–१ बाट विजयी भएका थिए भने श्रेष्ठ मकवानपुर २ बाट पराजित भएका थिए ।
एनआरएनएका ५ राष्ट्रिय समितिद्धारा आर्थिक प्रतिवेदन सार्वजनिक
सरिता गिरीको सांसद पद गयो, पार्टीबाट निस्कासन